Sidee Baad Reer Barakaysan u Heli Kartaa? | War Wanaagsan
Sidee Baad Reer Barakaysan u Heli Kartaa?
1. Maxay farxadda reerka uga maarmi karin in lays guursado?
Warka wanaagsan wuxuu ka yimaaddaa Ilaah Yehowah oo ah kan farxadda leh. Isaguna wuxuu doonayaa inay reeraha oo dhan farxad ku noolaadaan. (1 Timoteyos 1:11) Isagaa guurka aasaasay. Is guursadka uu sharciga waddanku raalli ka yahay waa muhim siday farxadda reerka u dhismi karto oo kalsooni carruur loogu korin karo. Kuwa raba inay Ilaahay addeecaan waa inay ixtiraamaan sharciga waddanka oo ku saabsan diiwaangelinta guurka.—Akhri Luukos 2:1, 4, 5.
Ilaahay muxuu guurka ka qabaa? Ilaahay guurka wuxuu rabaa inuu noqdo isku imansho ka dhexeysa nin iyo naag oo kala tag lahayn. Ilaahay wuxuu rabaa ninka iyo naagta is qaba inay daacad isku ahaadaan. (Cibraaniyada 13:4) Furitaanka wuu neceb yahay. (Malaakii 2:16) Laakiin haddii mar gogoldhaaf dhaco Ilaahay furitaanka iyo dib u guursi wuu fasaxaa.—Akhri Matayos 19:3-6, 9.
2. Sidee bay nin iyo naagtiisa iskula dhaqmi karaan?
Yehowah ninka iyo naagtaba wuxuu u abuuray inay isku habboonaadaan oo ay guurkooda ka wada shaqeeyaan. (Bilowgii 2:18) Ninka waa madaxa reerka sidaas daraaddeed wuu inuu shaqadiisa ku dadaalo siduu reerkiisa u dhaqaaleeyo oo u masruufo. Xilka ninka saaran waa inuu reerkiisa baro Ilaahay. Ninka wuu inuu naagtiisa naftiisa ka sii jeclaado. Ixtiraam iyo jacayl wuu inuu ka dhexeeyo nin iyo naagtiisa. Maadaama ninka iyo naagtaba dembile yihiin waa inay iscafiyaan siday guur farxad leh ugu istareexaan.—Akhri Efesos 4:31, 32; 5:22, 33; 1 Butros 3:7.
3. Miyaad ka tagi kartaa guur aan farxad lahayn?
Haddii ad dhibaato kala kulantid guurkaaga waa inaad labadiinnuba ku dadaashiin inaad jacayl iskula dhaqantiin. (1 Korintos 13:4, 5) Erayga Ilaahay muu fasaxin in kala tag lagu xalliyo dhibaatooyinka guurka ka mid ah.—Akhri 1 Korintos 7:10-13.
4. Carruuray muxuu Ilaahay idin la rabaa?
Inaad faraxdid buu Yehowah doonayaa. Talada ugu fiican buu ku siiyaa sidaad ugu raaxaysatid dhallinyaranimadaada. Xigmadda iyo waaya aragnimada waalidkaaga inaad ka faaʼiidaysatid buu Yehowah rabaa. (Kolosay 3:20) Wuxuuna rabaa inaad isaga ka farxisid sidaad u heshid nolol fiican.—Akhri Wacdiyahii 11:9–12:1; Matayos 19:13-15; 21:15, 16.
5. Waalidow sidee bay carruurtaadu farxad u heli karaan?
Waa inaad dadaashid sidaad carruurtaada u siisid cunto, guri iyo dhar. (1 Timoteyos 5:8) Welibana carruurtaada waa inaad bartid inay jeclaadaan Ilaahay oo ay isaga wax ka bartaan siday farxad u helaan. (Efesos 6:4) Markuu ilmahaagu arko jacaylkaad Ilaahay u qabtid qalbigiisaad taaban doontaa. Markuu tababbarkaagu ku dhisan yahay Erayga Ilaahay waxaad awood u leedahay inaad fekeridda ilmahaaga sida ugu fiican u hoggaamisid.—Akhri Sharciga Kunoqoshadiisa 6:4-7; Maahmaahyadii 22:6.
Carruurta in qalbiga loo xoojiyo oo la ammaano wax bay u tartaa. Waxayna u baahan yihiin in la saxo oo la edeb baro. Tababbariddan oo kale waxay ka dhawrtaa inay sameeyaan waxyaalaha xun oo farxaddooda ka lumin kara. (Maahmaahyadii 22:15) Haddaba carruurta in si xun oo naxariis daran loo edbiyo ma fiicna.—Akhri Kolosay 3:21.
Markhaatiyaasha Yehowah waxay soo saaraan buugag loogu talaggalay inay caawiyaan waalidka iyo carruurta. Buugaggan waxay ku saabsan yihiin Kitaabka Quduuska ah.—Akhri Sabuurradii 19:7, 11.
Laba suʼaal oo fudud oo guurkaaga sii fiicneyn karo.
Guur adag oo farxad leh ama mid daciif ah oo murugo badan wuxuu ku xiran yahay sidaad u fekertid.
Wadaag Wadaag Sidee Baad Reer Barakaysan u Heli Kartaa?